मासुमा शङ्का लागे डिएनए परीक्षण :: सेतोपाटी :: Setopati
मासुमा शङ्का लागे डिएनए परीक्षण
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन २४
तपाईंले खाइरहनु भएको मासु कुन जनावरको हो भन्ने शङ्का लागेको छ ? खसी, बोका वा कुखुराको भन्दै अरु कुनै जन्तुको मासु खाइरहनु भएको त छैन ?
यदि यस्तो तपाईंलाई शङ्का छ भने त्यसको समाधान हुनसक्छ डिएनए परीक्षण। खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गत आवमा मात्रै झण्डै ६५ वटा जनावरसम्बन्धी मुद्दामा डिएनए परीक्षणद्वारा समाधान निकालिएको छ।
तीमध्ये ४९ वटा मुद्दा वन्यजन्तुसम्बन्धी र १६ मुद्दा गाईसम्बन्धी भएको प्रयोगशालाले जनाएको छ।
एकदशक पहिलेदेखि मानिसको मात्रै डिएनए परीक्षण गर्दै आएकामा विगत प्रयोगशालाले तीन वर्ष पहिलेदेखि जनावरको डिएनए पनि परीक्षण सुरु गरेको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी दिनेशकुमार झाले बताए।
यो दुई वर्षमा वन्यजन्तु चोरी शिकार गरेर निर्यात गर्न लागेको भनी विभिन्न निकायबाट आएको मुद्दा पनि परीक्षण भएका छन्। कतिपय मुद्दामा झुक्काएर जङ्गली जनावर भनी घरपालुवा जनावरको अङ्गसमेत ओसारपसार भएको पाइएको प्रयोगशालाले जनाएको छ।
पहिलेपहिले पनि जनावरसम्बन्धी परीक्षणका लागि मुद्दा आउने गरेको प्रयोगशालाका डिएनए युनिटका प्रमुखसमेत रहेका झाले जानकारी दिए। डिएनए प्रविधिबाट परीक्षण नहुँदा प्रयोगशालाले ती मुद्दा फर्काउने गरेको उनले बताए।
अहिले विश्वका जुनसुकै प्रजातिको जनावरको अङ्ग फेला परेमा पत्ता लगाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'यसले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा सजिलो भइरहेको हामीले पाएका छौँ।'
प्रयोगशालामा जनावरका अङ्गस्वरुप बँदलेको अवस्थामा प्रयोगशालामा आइपुग्ने गरेको झाले बताए। खुला आँखाले ती वस्तु के हो भन्ने छुट्टिदैन। मासुलाई सुकुटी वा अरु भागलाई त्यसरी नै फरकस्वरुपमा बिक्री गरिँदा त्यो कुन जनावरको अङ्ग हो भनेर छुट्याउन नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले भने, 'हामीले ताजा र सुक्खा दुवै खालको मासुको परीक्षण गर्न सक्छौँ।'
फरक खालका जनावरको अङ्ग फरकफरक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। बाघको मासु सुकुटी बनाउन, अरु भाग औषधि बनाउन प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। कस्तुरीको बिना, भालुको पित्त औषधि बनाउनका लागि प्रयोग हुँदै आएको बताइएको छ।
उनले भने, 'स्वदेशभित्रै मात्रै होइन जनावरको ओसारपसार विदेशसम्म समेत भएका घटना हामीकहाँ आइरहेका छन्।'
यहाँ आएका घटनामा घरपालुवा जनावरमा सबैभन्दा बढी गाईसम्बन्धी मुद्दा रहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। तीबाहेक भैँसी, बाख्रालगायतका घरपालुवा जनावर वन्यजन्तु भन्दै झुक्काएर बिक्री वितरण भइरहेको उनले बताए।
कतिपय जनावरको अङ्ग कुहिएर बिग्रिएकै अवस्थामा आइपुग्ने उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'मासुलगायतका भाग कुहिसक्दा पनि हामीले डिएनए परीक्षणमार्फत नतिजा निकालिरहेका छौँ।'
कतिपय जनावरको अङ्ग नाङ्गो आँखाले हेर्दा उस्तै देखिने सूचना अधिकारी झाले बताए। उनका अनुसार पाटेबाघ र चितुवा र अरु पनि कतिपय जनावरको कतिपय अङ्ग खाली आँखाले हेर्दा उस्तै देखिन्छ। डिएनए परीक्षणबाट मात्रै कुन प्रजातिको र कुन ठाउँको जनावर भन्ने पत्ता लाग्ने उनको भनाइ छ।
अधिकांश घटनामा कुन चाहिँ जनावर हो भन्ने छुट्याइने र केही घटनामा भने जनावर हाम्रो देशको हो कि होइन भनेर छुट्याउन गरेको छ। त्यसबाहेक भारत, चीनलगायतका छिमेकी देशको हो वा अफ्रिका, अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकका जनावर हो? भन्ने सजिलै छुट्याइने गरिएको उनले बताए।
प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि आउनेमा गैँडाको खाग र छाला, हात्तीको दाह्रा, कस्तुरीको बिना, पाटेबाघ र चितुवाको छाला बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यी जनावरको छाला, खप्पर, हाड, नङ्ग्रा खाग, छाला, दाह्रा, बिनालगायतका अङ्ग चोरी शिकारीका मुद्दा बढी आएको प्रयोगशालाले जनाएको छ।
प्रयोगशालामा सबैभन्दा बढी अदालतबाट मुद्दा आउने गरेको सूचना अधिकारी झाले बताए। तीबाहेक निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, वन विभाग, जिल्ला वन कार्यालयलगायतका निकायबाट पनि मुद्दा आइरहेका छन्।
गत आवमा प्रयोगशालामा आएका ६५ मुद्दामा सबैको परीक्षण गरेर राय दिइसकेको उनले जानकारी दिए।
प्रयोगशालामा आव २०७३/७४ बाट वन्यजन्तुको डिएनए परीक्षण सुरु भएको हो। पहिलो वर्षमा विभिन्न निकायबाट ५८ वटा मुद्दाका ३०० दुई वटा नमूना परीक्षणका लागि आएका थिए।
प्रयोगशालामा विसं २०६२/६३ बाट पितृत्व पहिचान गरेर जैविक नाता कायम गर्न डिएनए परीक्षण सुरु भएको थियो।
प्रयोगशालामा अहिले मानिस र जनावरको डिएनए परीक्षणसँगै विवादित प्रलेख, टक्सिकोलोजी (विषादी, लागुऔषध, अल्कोहलसम्बन्धी), रसायन (केमेष्ट्री) तथा नार्कोटिक्स (लागुऔषध वा प्रज्ज्वलनशील पदार्थसम्बन्धी) मुद्दामा प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदै आएको छ। रासस
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६, १६:१४:००